National University of Sekutivocavoca kanye Ezemidlalo Ukraine Yokuxhumana
isifinyezo : yikha izithelo
Ungakhohlwa xoxa National University of Sekutivocavoca kanye Ezemidlalo Ukraine
Faka isicelo National University of Sekutivocavoca kanye Ezemidlalo Ukraine
National University of Sekutivocavoca kanye Ezemidlalo Ukraine (yikha izithelo) – elikhulu elalaziwa kahle hhayi kuphela ezweni lethu kodwa emhlabeni wonke is futhi waqaphela zemfundo ucwaningo kanye sports centre. Encwadini yakhe ethi ngokuvumelanayo kuhlangene ukuqeqeshwa kanye nokuqeqeshwa ochwepheshe abasebenza kulo mkhakha, ucwaningo lokubalulekile Kusetshenziswe, enezici ukubambisana kwamazwe omhlaba ne izikhungo iphrofayli efanayo futhi ezincikene emhlabeni wonke. A indawo ekhethekile NUPESU, unikezwa ngqo nyuvesi, sport zibalwa, lwenteke hhayi kuphela ohlangothini ngcono abafundi ezemidlalo, kodwa ngaphezu kwakho konke, indlela th ukuqeqeshwa at the University high-class abasubathi, kuhlanganise eminyakeni ezahlukene kwase Champions eziningi kanye abawinile of Olympic Games abawinile Championships zezwe kanye European kanye nezinye imincintiswano international ehlonishwayo. Esikoleni sethu okusezingeni, obasungulelwa 1930, ngesikhathi 80 Iminyaka esibone selokhu kwanikezelwa kwavela futhi namanje abasebenza ngendlela enenzuzo eyaziwa ngalé Ukraine ukuqeqeshwa esikoleni abaqeqeshi kwezemidlalo ahlukahlukene, izifundiswa, Abagqugquzeli imfundo ngokomzimba, ezemidlalo mass yemidlalo impumelelo eliphakeme kakhulu. Lokhu izisebenzi isitimela hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa izakhiwo ezifuywayo embonini, kodwa nezalo inqwaba amazwe ezivela emazweni ahlukahlukene iplanethi yethu. Umlando wakhe okhazimulayo ekolishi kwaqala – njengoba State Institute of Physical Culture Ukraine – Kharkiv, elalilisha ngalesosikhathi ngasekuqaleni 30, laliyinhloko-dolobha ye-Ukraine SSR. Futhi in 1944 wathunyelwa Kyïv, futhi esikoleni esiphakeme yaqanjwa ngokuthi – Kyïv State Institute of Culture Physical. Ekhula hhayi kuphela umthamo kodwa ngekhwalithi, institute kamuva, ekuqaleni kwawo-90-yalolucwaningo of XX wangekhulu – ngisho e-Ukraine ezimele – waba eyunivesithi kanye isikhungo enkulu ephakeme wemboni lezemfundo ezweni lakithi, futhi 1998 wathola isimo kazwelonke, the kufanele kuqashelwe neqhaza ekusakazeni ukunyakaza kwezemidlalo university ezweni lethu, ukuthuthukiswa kwemfundo ephakeme kanye nocwaningo lwezesayense, ukuqeqeshwa kwabasebenzi abaqeqeshiwe kanye high-class abasubathi. Namuhla National University of Sekutivocavoca kanye Ezemidlalo Ukraine ufundiswe abafundi abayizinkulungwane ezintathu, bazilungiselele mayelana 300 othisha, ngobani mayelana 40 – odokotela kanye noprofesa, Ngaphezu kwe 100 – PhD kanye nomsizi oprofesa.
inqubo Ukwamukelwa e-National University of Sekutivocavoca kanye Ezemidlalo Ukraine
Ukuze zisebenze National University of Sekutivocavoca kanye Ezemidlalo Ukraine abafundi angaphandle kufanele isicelo online nge Ukrainian Ukwamukelwa Center.
Faculty of-Olympic kanye nezemidlalo Professional;
Faculty of kwezempilo nemfundo ngokomzimba;
Faculty Joint belungiselela lodokotela ukuze isiko ngokomzimba kanye nemidlalo (kanye Bogomolets National Medical University);
Faculty of extramural (yokufunda ibanga) nemfundo postgraduate.
Ivano-Frankivsk College of Sekutivocavoca
Le nyuvesi wavula e 1930 njengoba-National Institute of Sekutivocavoca Ukraine e Kharkiv. Ngo 1944 sikhungo wayiswa Kiev futhi yashintsha igama layo ukuze Kyïv State Institute of Sekutivocavoca. Ngemva kutimela Ukraine, e 1995 inyuvesi kabusha Kyïv National University of Sekutivocavoca, okuyinto in 1998 atholwe isimo kazwelonke futhi ebizwa ngegama National University of Sekutivocavoca kanye Ezemidlalo Ukraine.
Uyafuna xoxa National University of Sekutivocavoca kanye Ezemidlalo Ukraine ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
National University of Sekutivocavoca kanye Ezemidlalo Ukraine kumephu
Izithombe: National University of Sekutivocavoca kanye Ezemidlalo Ukraine Facebook ezisemthethweni
National University of Sekutivocavoca kanye Ezemidlalo Ukraine Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa National University of Sekutivocavoca kanye Ezemidlalo Ukraine.